दाङकी २३ वर्षीया एलिसा गौतमले फेसबुकबाट लाइभमा आएर गरिन आत्महत्या -
July 2, 2020 July 2, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on दाङकी २३ वर्षीया एलिसा गौतमले फेसबुकबाट लाइभमा आएर गरिन आत्महत्या
काठमाडौ १८ असार । दाङकी एक युवतीले फेसबूक लाइभमा आएर देहत्याग गरेकी छिन् । अन्दाजी २३ वर्षीया युवतीले देहत्याग गरेकी हुन् । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–५ रानीजरुवामा बस्दै आएकी अन्दाजी २३ वर्षीया एलिसा गौतमले देहत्याग गरेकी हुन् । बुधवार राति फेसबूक ला’इभ ग रेर देहत्याग गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरले जनाएको छ ।
के के देख्नु परेको !!! २३ वर्षीया एलिसा गौतमले फेसबुकबाट लाइभ गरेर अस्ताइन फेसबुक लाइभमा नै आएर एलिसा गौतमले आत्महत्या गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए अनुसार यी युवती दाङकी हुन । यसरी आत्म हत्या गर्नु कत्तिको सही हो । अन्याय परेको भए कानुनी बाटो अपनाउनु पर्छ यसरी यस्तो गर्नु कत्तिको राम्रो होला सेयर गरेर सन्देश पुराउनुहोस साथै More Update को लागी हाम्रो यो पेजलाई पनि लाइक गर्नुहोस
Gepostet von Akhabaronline am Donnerstag, 2. Juli 2020
बेलायतमा कोभिड–१९ को सम्भावित भ्याक्सिनको ट्रायलले सकारात्मक
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ निर्वाध चल्न दिने आदेश टेरेन यातायात व्यवस्था विभागले
January 18, 2019 January 18, 2019 अखवार अनलाइन
April 27, 2019 अखवार अनलाइन
निरा गृहिणी समाजद्धारा दुइ दिने कपडाको सेनेटरी प्याड सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न
February 7, 2020 February 7, 2020 अखवार अनलाइन
‘प्रधानमन्त्रीकी छोरी’ यार्सागुम्बा खोज्न पाटनतिर
ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको रकम रोकेपछि